Izincwadi ezi-4 ezizokusiza ukuhlela ikhaya lakho | Bezzia
Izincwadi ezi-4 ezizokusiza ukuhlela ikhaya lakho
UMaria vazquez | | Ikhaya
Ngabe uzozimela kungekudala? Usuhambile nje? Ingabe impilo yakho isishintshe kakhulu muva nje? Lezi yizimo ongaphendukela kuzo kochwepheshe umhlobiso, ukuhleleka nokuhleleka, Kungakusiza ukuhlela ikhaya lakho futhi ngalo impilo yakho.
Ikhaya lakho liyisibonakaliso sakho nokuthi uzizwa kanjani. Ukufunda ukuhlela isikhala kahle nokubeka ukuhleleka kuwo wonke amakhona kuzokusiza ukuguqula ikhaya lakho futhi ngenxa yalokho impilo yakho. Yenza lula futhi uthole izindlela ezintsha Zizoba ngukhiye enqubeni naselulekweni nasezincazelweni ozozithola kulezi zincwadi ezine ezilandelayo esikholelwa ukuthi zingakwenza kube lula. Zonke zinezinguqulo zomzimba nezedijithali, ngakho-ke ungazifunda ngendlela othanda ngayo.
1 Izinsuku ezingama-21 zokulungisa indlu yakho
2 Umlingo wokuhleleka
3 Ibhukwana leNdlu eliHlanzekile nelicocekile
4 Ikhaya ozohlala kulo: Hlela kabusha indlu yakho, futhi, ngenhlanhla nempilo yakho
Izinsuku ezingama-21 zokulungisa indlu yakho
U-Alicia Iglesias Galán
Indlela yezinsuku ezingama-21 yokugcina indlu yakho ihlelekile yazalwa ngokwenzeka kumbhali empilweni yakhe yansuku zonke futhi yathuthukiswa ngokuyisebenzisa emakhulwini amaklayenti anezinkinga ezahlukahlukene ezihlobene nokuqongelelwa noma ukuhlelwa kwezikhathi nezikhala. Ukuxuba amasu okuphatha isikhathi Nabanye abangajwayelekile njengoFeng Shui noma uDan-sha-ri, u-Alicia Iglesias udale indlela eguqulwe yangokoqobo namasiko aseSpain.
U-Alicia naye ungemuva Ukuhleleka nokuhlanzeka ekhaya, ibhulogi enokuqukethwe okuqaphele kakhulu okuzokusiza ugcine indlu yakho iqoqekile, izokufundisa ukuthi ungazinakekela kanjani izingubo zakho futhi izokunikeza amathiphu wokuhlanza nokuhlobisa.
"Shintsha ikhaya lakho libe yindawo ehlanzekile futhi ehleleke ngokuphelele, futhi umangale ukuthi impilo yakho iguquka kanjani!" Indlela yokuguqula ikhaya lakho ibe yindawo ehlanzekile necocekile unomphela, ibilokhu ikhona kudume umhlaba wonke. Ukususa konke ongakudingi futhi wenze izinguquko ezithile ekhaya lakho kuzoba ukhiye wokukufeza.
EBezzia sayifunda le ncwadi eminyakeni eyedlule futhi siyavuma ukukugqamisa lokho amakhabethe ethu babengasafani futhi. Uma usuhlanganise indlela yakhe yokwehlisa inani lezimpahla ekhabethe lakho futhi uzihlele, akusekho ukubuyela emuva! Futhi ngendlela efanayo obeka ngayo i-oda ekhabethe lakho, ungayisebenzisela ukuhlela ikhaya lakho lonke.
Ibhukwana leNdlu eliHlanzekile nelicocekile
Isimo sendlu yethu sinomthelela onqumayo emizweni yethu nasemndenini wethu. Uma sifuna impilo ibe lula futhi ibe namanzi amaningi, kufanele sigcine ukuhleleka. Ngalokhu, umbhali wale ncwajana osebenzayo usinikeza uhlelo oluhlakaniphile oluzosifundisa ukusungula izindlela ezilula zokuhlanza ngaphandle kokuqaphela.
Siyavumelana neminye yemibono esiyifundile ngalesi sihloko ekhombisa ukuthi uma uqala ukufunda le ncwadi ikunikeza umuzwa wokuthi "yincwadi yenkosikazi enhle." Kodwa-ke, kuyasebenza kakhulu; ikakhulukazi kulabo abasanda kuzimela noma indlela yabo yokuphila esishintshile muva nje futhi abanaso isikhathi esincane.
Ikhaya ozohlala kulo: Hlela kabusha indlu yakho, futhi, ngenhlanhla nempilo yakho
Isiphithiphithi ekhishini, egumbini lokuphumula, ekamelweni, nasendlini yangasese ... oda kusuka emnyango wegumbi lokugqoka. Le ncwadi ikufundisa ukuhlela indawo kahle, usabalalise ifenisha, usebenzise ukukhanya, ubeke ukuhleleka kuwo wonke amagumbi endlu yakho, futhi, nasempilweni yakho. Izokwenza lokhu ngemifanekiso engama-300, eyenziwe ngezandla futhi eqondakala kalula.
"Ukuchofoza" okukodwa kuphela okudingayo ukuze uqale ukufunda noma iyiphi yazo. Awekho ama-ebook azokubiza ngaphezulu kwe- € 9,99, intengo eyenza kube lula ukuphuma ukuyithenga. Akuyona yonke into abayiphakamisayo ezolingana nendlela ophila ngayo, kepha ungathola ezincane kubo bonke. imibono yokuqalisa ukuhlela ikhaya lakho. Sifunde iningi labo kule minyaka eyisithupha edlule futhi yize benezitayela ezihluke kakhulu, sithole imfundiso ewusizo kubo bonke. Ngisho nokusobala kakhulu kwesinye isikhathi kufanele ukukhunjulwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Izincwadi ezi-4 ezizokusiza ukuhlela ikhaya lakho
I-Las Chicas del Cable nolunye uchungechunge lwezothando kuzingxenyekazi
Ikhekhe lelamula ne-alimondi